Haweeney 30 sano Indhool iska dhigaysay si aan loo salaamin! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Haweeney 30 sano Indhool iska dhigaysay si aan loo salaamin!
Posted by: radio himilo June 6, 2017
Muqdisho – 28 sano kahor, Carmen Jiménez oo ku nool caasimadda Madrid ee dalka Spain ayaa gebi ahaanba noqotay indhoole dhaawac indhaha kasoo gaaray awgeed. Ugu yaraan, taasi waa waxa ay u sheegtay qof walba oo ay kamid yihiin reerkeeda – waayo waxay ku daashay dhihidda ‘helo’ qof kasta mana dooneyn inay dadka salaanto.
Previous: Lacazette: “UCL majabinayo kuma xirna heshiiska rabitaankayga.”
Next: Dhageyso: Barnaamijka Martida Ramadaanka 06 06 17